Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguKaye
Ngaba ujonge into emenyezelayo ecocekileyo nekhululekileyo, ebandakanya isidlo sakusasa esinesisa kunye nokufihla indawo yokupaka ezitalatweni?
I-Willowfarm ibonelela ngoku kunye nokunye. Ibonisa izinto zale mihla phakathi kwendawo enoxolo kumda wedolophu. I-King Bed etofo-tofo, i-air conditioning ye-reverse, i-WiFi kunye nokufikelela kwi-Netflix, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi labucala kunye nokufikelela kwindawo yokuhlalisa engaphandle enelanga nazo ziyinxalenye yale ndawo yodwa.
Vuka uye kugqabhuka ukukhanya kwelanga kwiifestile ezinkulu zebhayi, isandi sobomi beentaka bomthonyama, kunye nevumba lentsasa yeNespresso eyenziwe kwigumbi lakho. Isidlo sakusasa esinesisa esiquka amaqanda asimahla asuka egadini kunye nezinye imveliso yalapha ekhaya siya kubonelelwa ngempelaveki.
Le yindawo esanda kulungiswa enophahla oluphezulu, iifestile zomsedare kunye neengcango, umgangatho wamaplanga kunye nempahla esemgangathweni kulo lonke. Igumbi ligqitywe ngombala ococekileyo, wendalo. I-Platinam yamava eSplit King Bed ibonelela ngamalungiselelo okulala aguqukayo nokuba ngabatshati okanye abangabodwa.
Nokuba ufuna ukucima okanye uhlale uqhagamshelwe, esi sithuba sikulungele. Igumbi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngabahambi bale mihla kwaye liza liphelele kunye namachweba amabini okutshaja i-USB kwicala ngalinye lebhedi, iindawo zamandla ezaneleyo kuyo yonke indawo, iWiFi engenamkhawulo kunye nomabonakude wescreen esicaba kunye neAppleTV. Iindwendwe ziyalonwabela ithuba lokuhlala phantsi kwaye zicime ngokungena mda kwiNetflix.
Ibhedi enkulu eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.98 · Izimvo eziyi-219
IMudgee luluntu lwasemaphandleni oludlamkileyo nolunenkqubela kwaye inezinto ezininzi zokubonelela abantu basekhaya kunye neendwendwe ngokufanayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Kaye
Ubumfihlo bondwendwe buyahlonitshwa kwaye ukusebenzisana nomamkeli kungenakuzikhethela. Uhlala esizeni kwaye uya kukuvuyela ukunceda nangaliphi na ixesha.
Izilwanyana zasekhaya ziquka iipoodles ezintathu ezincinci; UChelsie, uArchie, kunye noBella nabo bahlala kule ndawo. Baqeqeshwe kakuhle kwaye bahlala benomdla wokubulisa iindwendwe zethu. U-Archie lolona longezo lwamva nje kwaye uchitha ixesha elininzi kumnyango olandelayo njengeqabane labazali bam abasele bekhulile.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9949
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mudgee